नेपालमै यस्तो अनौठो भीर, जहाँ छ नुनको खानी ! « Deshko News
नेपालमै यस्तो अनौठो भीर, जहाँ छ नुनको खानी !
सिन्धुपाल्चोक, माघ ५
अनौठो आकृतिको सेताम्मे भीर । जसको सेतो धुलो चाख्दा नुनको स्वाद आउँछ । स्थानीय चौंरी गोठाला दिनहुँ त्यहाँ पुगेर नुन चाख्छन् र पाइने सेतो धूलो प्रसादका रूपमा घर लान्छन् । जुगल गाउँपालिका–३ तेम्बाथान गाउँको जंगली भीरको भित्ताभरि स्वाद चाखेपछि त्यहाँका गोठालाले नामै ‘नुनिलो भीर’ राखेका छन् ।
धेरै वर्षअघि जापानी विशेषज्ञको एउटा टोलीले उक्त भीरको सेतो पदार्थ के हो भन्नेबारे खोजी गर्ने प्रयास गरेको थियो । टोली हेलिकप्टरबाट दुई पटकसम्म त्यहाँ आएको थियो । तत्कालीन सरकारले उत्खननको अनुमति नदिएको गाउँलेले सुने । ‘त्यो टोलीले खोजी गर्दा के पत्तो लगायो भन्ने हामीलाई थाहै भएन । त्यसपछि फेरि यो भीरबारे खोजीनिती भएन,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँका मान्छेले आएर पुज्ने थलोमै सीमित बन्यो ।’
जुगल हिमालको काख दीपु, तेगादेखि तेम्बाथान र गुम्बाथानका गाउँहरूमा यहाँको नुन चाखे पवित्र हुने जनविश्वास छ । त्यसैले गाउँले समूहसमूहमा बेलाबखत नुनिलो डाँडामा आउने गरेका छन् । पाल्देन माम् अर्थात् जुगल हिमालको छिम्दाङमा बस्ने महाकालीको शक्तिले यहाँ यस्तो पर्वत बनेको तेम्बाथानवासी मान्छन् ।
१७ वटा चौंरी गाई लिएर धेरैपटक नुनिलो भीर क्षेत्रको घना जंगल पुग्ने गरेका दीपुगाउँका ५५ वर्षीय धर्के शेर्पा यसलाई चमत्कारी नुनको पर्वत भएको दाबी गर्छन् । ‘यो भीरको स्वरूप हेर्दै पाल्देन माम् महाकालीजस्तै अचम्मको देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।
‘नुन खाएपछि फुर्ती नै छुट्टै आउँछ । त्यहाँको नुन ल्याएर मिसाएर खान्छु, चौंरीलाई पनि पानीमा मिसाएर दिन्छु,’ उनी भन्छन् । नुनिलो भीरसम्म सडक जोडिएको छैन । यसबारे जनप्रतिनिधिले पहलकदमी नलिएको स्थानीयको गुनासो छ ।‘दिनहुँ चौंरीगोठाला त्यहाँ पुगेर नुन चाख्छन् र नुनिलो धूलो प्रसाद भन्दै घरघर लान्छन् । यो एउटा मन्दिरजस्तै बन्ने सम्भावना देख्दै छु,’ ६५ वर्षीया फुर्पालामु शेर्पाले भनिन् ।
राजधानीबाटै दिनभरमा पुगिने तेम्बाथान गाउँबाट एक घण्टाको जंगल छिचोलेलगत्तै पुगिने नुनिलो भीर चढ्न सहज छ । बाख्रा र चौंरीगोठाला ब्रह्मायणी नदी किनार हुँदै भीरमा पुगेर दोसल्ला र पातीले पूजा गर्छन् । यसबारे सुनेपछि अचम्म मान्दै जुगल गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिर्जना तामाङले यसबारे खोजी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
‘त्यहाँको पूर्वाधार निर्माणसँगै नुनिलो भीरको अनुसन्धान कसरी हुन सक्छ, त्यो गर्छौं,’ उनले भनिन् । जुगलको हिमशृंखलाको काखैमा भएकाले उक्त भीरले जडीबुटी र खनिज पदार्थको सम्भावना बोकेको उनले बताइन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।